HAWEENOOW WAA HIBO EEBE EE QAATA.
Ilaah baa mahad leh nabad gelyo iyo naxariis Eebe korkiisa ha ahaato Nebigeenii Suubanaa Maxammed(nnk).
Waxaan jeclaan lahaa inaan qoraalkaan u hibeeyo hablaha soomaaliyeed ee jecel samaha iyo horumarka soomaali, kuwaasoo ah kuwa maanta jiilka soomaali ee u baahan barbaarinta in ay daadihiyaan aan rabno, kalsoonina aan ku qabno.
Waxaan u hibeyn lahaa xadiiskan, oo ah bal inaan fiirino sida dumarku ugu heelanaayeen(rabeen) inay bartaan cilmiga iyagoo ka qaadanaya Rasuulka Suuban.
Waxaa u timid Rasuulka ASMO BINTUL YAZIID ALSAKAN(rc) asagoo asxaabtiisa ku dhex jira. Markaa ayay tiri waxaan ka socdaa dumarka, waxaana ogaataa inay nafsadaydu madax furasho adiga kuu tahay, ma jirto haweeney joogta bari ama galbeed oo maqashay inaan anigu adiga arintan kuugu imid ama yey maqline, ilaa wey ila qabtaa ra'yigaan, Ilaah wuxuu kuu soo diray rag iyo dumar dhammaan, waana ku rumaynay adiga iyo Ilaahaagaba, balse haddaan haween nahay waxaan nahay kuwo la soo koobay, oo dhiman, oo guryaha idiin jooga, shahwadiinaan idiin dhowrnaa, caruurtaan idiin qaadnaa, idunkuse haddad rag tihiin waxaad na dheer tihiin, Jimcaha iyo Jamaacadda(salaada), ku jiranoo soo booqataan, maydkood raacdaan, xaj walboo soo xajisaan, waxaa waxaasoo dhan idiinkaga fiican jidka Illaahood u dirirtaan. Hadduu mid idinka mida baxo asoo xajinaya ama cumreysanaya ama xaajo kaleba, maalkiinaan idiin xifdinaa, dharkaan idiin tolnaa, waxaan idiin barbaarinaa ilmahiina, marka miyaan idin kalaqayb galaynin kheyraadkaa Rasuulkii Alloow
Markaasuu Nebigu(nnk) u soo jeediyay wajigiisa oo dhan saxaabada kuna yiri "MA MAQASHEEN HADAL QOF DUMARA TIRAAHDO OO KA WANAAGSAN, IYADOO WEYDIINEYSA WAX DIINTEEDA KU SAABSAN OO INAY OGAATO AH". Markaasay yiraah deen Rasuulkii Alloow ma aanan malaysanin inay qof dumari hanuun dalbeyso ilaa meesha ay gaarsiisan tahay midaan. Markaasuu Rasuulku soo eegay iyadii kuna yiri "OROD OO TAG HAWEENEEY YEEY, WAXAADNA U SHEEGTAA DUMARKA KAA DANBEEYA MIDAAN, MIDI WANAAGA AY U SAMAYSO NINKEEDA, RAALI NOQOSHADIISA OOY DALABTO, WUXUU OGOL YAHAY OY RAACDO, AYAA WAXAA SOO DHAN U DHIGMA".
Markasay haweeyneydii tagtay iyadoo asha haadanaysa, oo Ilaah weyneynaysa bishaareysi dartiis.
Waxaa weriyay Ibnu Casaakir "taariikhda dimishiq"(7/363-364)
Waataa waxaa wax rag uu sameeyo oo dhan u dhigmay, dumar oo guri ku koobnaada. Midaan miyaad maanta ku kartaa haweenkanaga, waxayba u qaadanayaan xumaan iyo inaan walibana ku liideyno iyaga oo guriga aan dusha walibana quful uga dhufanayno, balse inta aan ka heleyno haween yaqaana howshoodu waxay tahay guul ma gaarayno, sida saxaabiyadaa u fahamtay markii wixii ay awooday oo ay kari kartay lala barbar dhigay wax rag sameeyey oo dhan tirina Allaahu akbar
garatayna inay tahay guul u soo hoyatay dumarka. Oo guul darada waxa noogu sugan markaan is dhex boodnay, oo dumar u duubteen waxay gaari karin oo howlihii raga ah ragna u durbaan tumay ileyn waa wuxuu doonayee, oo meel u degeyba ku deneystay dumarkii. Marka haweenoow waxaad sharaf ku leedihiin gurigiinood ku koobnaataan oodna ku heleysaan xushmo iyo xafidsanaan aduun.
Balse waxaa baryahaan nagu soo batay hablo badan oo la soo banaan baxay inay sheegtaan inay xaquuq raadis yihiin, oo raga soomaalidu xuquuq ka dhunsaday, kuwaasoo u batayba inay aflagaadeeyeen xataa waalidkii dhalay oo ku sheegaan, in la dilay, la qasbayo oo la jajuubayo, qoorta wax ayna rabin loo galinayo. kuwo kalena u xusul duubayaan, xil aan qabanoo, xukunka hanala ku daro, xildhibaano aan noqono. Kuwo kalena xoogsi baan rabnaayoo xaafiis aan ku shaqayno iwm. kuwaasoo kuli dadkii tijaabiyay arrintaan oo arkay qasaaraheeda ay yihiina maanta kuwa nagula daba wareegaya oo rabaan inay na badaan jabkey tijaabiyeen. Marka maxay reer galbeed ka faa'ideen banaan bixinta dumarkooda Madax weyne inantii xaafiiska uga shaqaynaysay faraxumeeyey, wadaado dumar la tuntoo waliba magdhaw la siinaayo iwm. taasoo ah inay sharaf tireen dumarkii oo xurmadii ka qaadeen.
Maxay tahayse xuquuqda ay reer galbeed maanta dumarka u dhowreen oon kaga dayanaa? Walee waa dhalanteed iyo waxaan jirin. Ee walaalaheena soomaaliyeedoow waxaan leeyahay, hablahanagu waa barbaariyaasha jiilka cusub, oo jiilkeenii jiidayee aan barbaarino jiilka cusub barbaarin saxa, waana inaan u aragnaa in haweenka nagu qiimo badan yahay oo qaali yihiin(haweenkanaga waxaa qiimihii iyo sharaftii laga qaaday 11 janaayo markii raga lala simay) wixii qaaliyana qasnad baa lagu xiraa lana qiimeeyaa
ee dumaroow naga aqbala midaan qiimaha iyo qaalinimada idiinku jirto. Dibad baxna wax idiinma taroo diif yay idin qabanoo duur joog idiin cunin.
FG:- wixii qaladaad fasiraada xadiiska ah waxay idiin cadeyn kartaa uun cilmi yaraanteyda iyo sidaanba carabiga u aqoon ee ha la iga raali ahaado, waxaa arintan igu dhaqaajiyay waa inaan u dadaalno saan u barbaarin lahayn jiil fiican oo fayoow.